Eudoxie Yao dia mbola manana fanambarana vaovao vaovao amin'ny Internet - teles relay
Eudoxie Yao dia mbola manana fanambarana vaovao vaovao amin'ny Internet
Mazava ho azy fa ny go bobaraba dia mbola tsy nahavita nanamory ny tranokala. Ilay kardashian kim afrikanina dia nanao fanambarana vaovao tao amin'ny pejiny Instagram izay efa nampihomehy ilay latabatra tamin'ny lafiny rehetra.
Eudoxie Yao dia nanao famerenana indray ny fiainany tamin'ny fiainany mba hahafantaran'ny mpankafy azy ny zava-misy izay tsy dia nisy firy na kely aza ny nanamarika ny fiainany. Nanomboka tamin'ny fanambarana izy fa tsy mahita ny tenany ho olo-tsotra, fa toy ny kintana mendrika hodinihina kely.
Nanohy ny lalana mivantana izy, nanaparitaka ny lazany nitombo any ivelany. Doxy Rover, satria io no anaram-bosotra nomeny ny tenany taorian'ny nahazoany ny Range Rover faharoa, dia nilaza fa ny kintana lehibe avy amin'ny kontinanta maro no te hihaona aminy.
Amin'io lafiny io dia nanonona kintana lehibe vitsivitsy izay nangataka ny fanatrehany tamin'ny lanonana fety i Doxy Rover. Izy ireo dia Chris Brown, Rick Ross ary maro hafa.
Tokony hampatsiahy ihany koa fa ny mpanao hatsarana matihanina dia nampahafantatra azy fa ny haino aman-jery mahazatra dia toy ny "Ny "" Daily Mails ". Nilaza ny influencer fa niresaka momba azy tamin'ny lahatsoratra ireo media lehibe rehetra ireo. Nanamafy ny teniny izy tamin'ny fampiana "Ny Amerikanina sy ny Japoney dia tonga manao tatitra momba ahy."
Tian'ny kintana ny kintana, nomena ireo zava-misy ireo, haneho fanajana azy ary hampitsahatra ny milaza fa "mpandainga" izy. Miandry isika mba hijery raha hampihena ny tsikera ataon'ny mpampiasa Internet ho azy ny fampitandremana nataony.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/cote-divoire-eudoxie-ya-fait-encore-de-nouvelles-revelations-croustillantes-sur-la-toile/
Matin'ny fisaonana vaovao ny fianakavian'i DJ Arafat